နံပါတ်များအရလူမှုကွန်ယက်များ Martech Zone
သောကြာနေ့, ဇွန်လ 24, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2011 Douglas Karr
မနေ့ကငါတို့အပေါ်လှပသော Infographic ပြသခဲ့သည် လူမှုကွန်ယက်၏သမိုင်း။ ဒီနေ့မှာနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ Infographic - လက်ရှိလူမှုကွန်ယက်များ၏အခြေအနေ။ ၎င်းသည်အရွယ်အစား၊ လူ ဦး ရေနှင့်ကြီးထွားမှုအရဆိုရှယ်ကွန်ယက်များအပေါ်နက်ရှိုင်းသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှုမြင်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြည့်နှက်နေသည့်အချက်သို့ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုအချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည်။ ဒီအချက်အလက်တွေဟာယဉ်ကျေးပါတယ် လူမှုမီဒီယာကိုလောင်ကျွမ်း.
မှားသောစှဲပေးစေခြင်းငှါတစ်ခုမှာဇယားဖြစ်ပါတယ် Ning, သူက၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်အခမဲ့ထံမှငွေပေးချေကွန်ယက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကလူအတော်များများကိုဆုံးရှုံးသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးတဲ့လူမှုရေးကွန်ရက်ပံ့ပိုးသူအဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အဖြစ် ၂၀၁၁ မှာတိုးတက်လာတာပါပဲ။
ဇွန် 24, 2011 မှာ 12: 08 pm တွင်
ကျိန်းသေစိတ်ဝင်စားဖွယ် infographic, ဒါပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနံပါတ်များရှိခဲ့သည်! Plaxo သည်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးလူ ဦး ရေပါဝင်သောနေရာဖြစ်သည်ကိုသိရသည်မှာအလွန်ဝမ်းသာစရာကောင်းသော်လည်း၎င်းသည်ခက်ခဲသောဂဏန်းများနှင့် ပို၍ အသုံးဝင်သည်။
ဇွန် 24, 2011 မှာ 12: 20 pm တွင်
ဟယ်ယေရမိ! အချက်အလက်များနှင့်ရလဒ်များသည် Infographic ၏အောက်ခြေတွင်ဖော်ပြထားသောအစီရင်ခံစာတွင်ရှိသည် http://bit.ly/2011-social-analysis
ဇွန် 24, 2011 မှာ 12: 44 pm တွင်